Mirqaanka Ma Miyir Beel Baa Laga Dhaxlaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Kuma Mustafe Cagjar?
Afrikaan.so, April 21, 2016
BBC Somali — May 16, 2019
Daraasaddan qaadka oo ay maalgelisay dowladda Kenya waxaa ku baxday miisaniyad dhan 38 milyan oo shilinka Kenya ah. Waxaa cilmi baarista lagu wareystay 831 qof oo 306 ka mid ah oo u dhiganta 37% ay cunaan qaadka kala barna ay yihiin rag.
Waxaa kale oo lagu ogaaday daraasaddan in dadka qaadka cuna intooda badan ay ku daraan cabbidda khamriga iyo Sigaarka. Daraasaddanna waxaa diiradda lagu saaray xiriirka ka dhaxeyn kara cunista qaadka iyo calaamadaha qofka u horseeda iney cudurrada maskaxda ku dhacaan. Dr Evans Amukoye, oo ah maareeye ku xigeenka hay’adda Kemri ayaa wargeyska The standard ku yidhi: “Daraasaddii hore iyo tan ay hadda hay’addu soo bandhigtay waxba kuma kala duwana balse tan dambe ayaa qota dheer.”
Saaynisyahanada inta ay daraasaddooda qaadka wadeen waxay si gaar ah diiradda u saarayeen da’da, jinsiga, isticmaalka tubaakada ama khamriga. Professor Charles Mbakaya oo wax ka dhiga jaamacadda Rongo ayaa cilmi baaris uu 2017-kii soo bandhigay wuxuu ku sheegay in qaadka uu xiriir la leeyahay cunta qaadashada qofka oo aad u yaraata.
Balse daraasaddan cusub ee 2019-ka laguma sheegin cunista qaadka inuu kor u qaadayo awoodda galmada, cunna qaadashada iyo qofka cuno inuu ku caatooba toona. Saaynisyahannada sameeyay daraasaddan natiijadeeda la soo bandhigay waxaa ku wehiliyey cilmi baadhayaal ka kala socday Jaamacadaha Moi, Eldoret iyo Rongo.
Tags: Mirqaanka Ma Miyir Beel Baa Laga Dhaxlaa?
Next post Calaamadaha Lagu Garto Kalaamisada 'Eclampsia'.
Previous post Calanka Soomaaliyeed Cunsuriyad Ma Yaqaano Cidna Gooni Uma Laha...